China Vapor Recovery Valve factory sy mpanamboatra | Jiasheng
Laharana maodely: DN50, DN80, DN100
Temperature of Media: Temperature mahazatra
Fanerena: tsindry antonony
Haben'ny seranana: 2 ′, 3 ′, 4 ″
Anaran'ny vokatra: Cap Aluminium Flange Fire Resistance Ventilation
Cap fanoherana fanoherana ny afo
1. Fampidirana fohifohy ny vokatra:
Ny satroka fiarovan-tsolika fanoherana afo dia takelaka aluminium marefo, akorany dia alimo. Ny vovonan'ny afo dia ny takelaka mitafo vy sy ny takelaka vita amin'ny alim-pito izay mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny teknolojia CB-5908-2005. Rehefa manitatra na miditra amin'ny menaka ny tanky, izany hoe amin'ny alàlan'ny afo manohitra ny fototry ny tabilao mihombo ivelan'ny tohatra. Rehefa tanky hametrahana diloilo amin'ny fitoeran-drano, ary hisorohana sy esory ny afo rehetra avy amin'ny tanky, dia miarova tena.
2. Toetra mampiavaka:
3. Fanamarihana ho an'ny fametrahana:
Ny fonon-drivotra dia tokony hapetraka mitsangana ao amin'ny tampon'ny tanky, hiantohana ny fifandanjana anatiny sy ivelany. Mba hiantohana ny fiarovana ny tanky sy ny tobin-tsolika.
4. Fikojakojana sy fanamboarana:
Mba hijerena ny fahitan'ny rivotra ny takelaka misy rivotra mifono vy mifono vy, hiantohana ny fanoherana ny afo tsara, ny fahitan-drivotra tsara. Raha mamaha ny vodi-fonosana saron-tava azo tsofinaina, rehefa fikojakojana sy visy ny atiny tsy miovaova amin'ny afo, manala ny vovo-drindrin'ny afo, zahao
Karazana fifandraisana: Flange
Teny lakile: Cap fanoherana rivotra
Size: 2 "2.5" 3 "
Vatan'ny vatana: Aluminium
Fitsipika na tsy fenitra: fenitra
Fahaiza-mamatsy: 30000 Piece / Pieces isam-bolana
Antsipirian'ny fonosana: boaty baoritra mahazatra na fangatahan'ny mpanjifa
Fotoana itarihana: nalefa tao anatin'ny 15 andro aorian'ny fandoavana
voasakana, ny deformation na ny harafesina ny fototr'afo, tokony hanadio avy hatrany na hanolo ny vatan'ny afo maharitra, ny fanamarinana isam-bolana indroa.
Anaran'ny vokatra: Fanoherana fanoherana ny mpamono afo
Materia: Body: firaka alimo / vy tsy misy fangarony
Size: DN50, DN80, DN100
Media: Lasantsy, solitany, Diesel, rano, sns
1.Ny vidin'ny fifaninanana indrindra
Izahay dia mpanamboatra, mivarotra vokatra mivantana amin'ny mpanjifa izahay fa tsy amin'ny alàlan'ny olona afovoany. Manangona vola kely izahay ho anao.
Miaraka amin'ny ekipa matihanina mifehy ny fizotran'ny vokatra, omeo antoka ny kalitao avo lenta.
3. Drafitra sy famokarana.
Raha mitaky fangatahana manokana ianao dia andefaso anay ny taratasy famolavolana na ny masontsivana momba ny vokatra, dia hamolavola sy hanamboatra azy ho anao izahay.
4. Fanaterana haingana kokoa.
Koa satria orinasa manana trano fanatobiana entana lehibe izahay, dia manana vokatra be dia be notehirizina.
5. Serivisy aorian'ny fivarotana
ara-potoana sy mahomby.
Previous: Valizy Safty Pressure Safery
Manaraka: Valve vy tsy misy vy
Valizy miaina mahery setra manohitra ny afo
Valizy Safty Pressure Safery
Famaritana ny vokatra Napetraka eo an-tampon'ny kamio kamio, miaraka amin'ny asan'ny vonjy taitra maika. Raha avo kokoa noho ny tsindry omena ny tsindry ao anaty menaka dia hisokatra ny valizy handany ny tsindry anatiny. Parameter teknika lehibe karazana fitaovana mari-pana amin'ny mari-pahaizana momba ny asa-miasa JSVB 304/316 -20 ℃ ~ + 150 ℃ 0.05Mpa ~ 0.4Mpa Flange
Rano mitete petrole
Fanoritsoritana ny vokatra 1. Fanamboarana: Tube: rubber vita amin'ny synthetic mahatohitra lasantsy, gazoala, solika solika. Fanamafisana: tariby tariby matanjaka tokana voafehy. Fonon-tànana: fanoherana ny fingotra vita amin'ny afo-synthetic, mitafy mahatohitra, mahatohitra ny toetr'andro ozone. 2. Temperature: -40 ℃ hatramin'ny + 70 ℃ 3. Loko: mainty, manga, mena ary maintso sns 4. Fampiharana: Ho an'ny fampiharana paompy famoahana solika, ao anatin'izany ny lasantsy, ny gazoala, ny lasantsy misy oksizenina (hatramin'ny farafahakeliny 15% oxygène ), menaka fanosorana, ary menaka mineraly hafa ...
Operatera fanaraha-maso ny valizy ambany
Tsipiriany haingana Standard na tsy manara-penitra: Structure mahazatra: Pressure manuale: mari-pana ara-dalàna ny mari-pana amin'ny haino aman-jery: fitaovana: hafanana ara-dalàna Media: solika Port Size: Toeram-piandohana: Sina (Tanibe) ny serivisinay 1). Vidiny mivantana mivantana, mifaninana kokoa, karazana rehetra misy bobongolo misy, kojakoja mifanentana atolotra. 2) .Ny orinasanay manokana, fanaraha-maso henjana isaky ny dingana famokarana, mifehy tsara kokoa ny kalitao sy ny fotoana fandefasana 3) .Teknika matotra, kalitao avo lenta, vokatra tsy dia misy kilema mandritra ny prod ...
Weld Elbow 90 Degre